Nahoana no Ratsy ny Manao Ody?
Ratsy ny Manao Ody
Tian’i Satana hanao ody ianao. Maro ny olona manatitra zavatra ho an’ny razana. Mitady fiarovana mantsy izy ireo satria matahotra sao ampijalin’ny fanahy ratsy. Mampiasa ody àry izy ireo, satria mihevitra fa misy hery mahagaga ireny zavatra ireny ka afaka miaro azy. Anisan’izany ny peratra na vakana, na koa ranon-javatra sotroina na ahosotra amin’ny vatana. Ny sasany indray manafina tapa-kazo na zavatra hafa ao an-tranony na any ambanin’ny tany. Misy koa mampiasa ody mba ho lasa mpanankarena, ho afa-panadinana, na mba hahazo vady.
I Jehovah no tena afaka miaro anao amin’i Satana. Mahery lavitra noho i Satana sy ny demoniany i Jehovah Andriamanitra sy ny anjeliny. (Jakoba 2:19; Apokalypsy 12:9) Vonona hampiasa ny heriny i Jehovah mba hamonjena ny namany, izay tsy mivadika aminy mihitsy.—2 Tantara 16:9.
Hoy ny Tenin’Andriamanitra: “Aza manao sikidy.” Tsy tian’i Jehovah ny sikidy sy ny mazia, satria lasa eo ambany fahefan’i Satana Devoly izay manao an’izany.—Levitikosy 19:26.
Misy mino fa ny faharatsiana ao amin’ny olona fotsiny ny Devoly. Marina ve izany?